Hampitomboana ny tombam-bidinao manokana, ataovy tsy tapaka ireo zavatra kely 10 ireo - An-Tsaina
Ny fahatokisan-tenan'ny olona iray dia mitana andraikitra lehibe amin'ny tsy fahitany ny tenany fotsiny, fa koa ny fahitany ny toerana sy ny fomba ahatongavany amin'izao tontolo izao.
Ny olona tsy manana fahatokisan-tena dia mety iharan'ny fisalasalana tsy amin'ny antony tsy ampy fahaizana, ampy fahaizana, tsara bika, na mahay.
Ny marina dia ny olona tsirairay eto amin'izao tontolo izao dia manana tanjaka sy kilema, toetra tsy manam-paharoa ary quirks izay mahatonga azy ireo ho olona. Tsy ny olona rehetra no ho tia azy ireo ary tsy maninona. Tsy mila izany ny olona rehetra.
Etsy ankilany, zava-dehibe ny fitiavantsika ny tenantsika. Ny fananganana sy fanatsarana ny fahatokis-tenantsika tena dia ampahany manan-danja amin'io piozila lehibe kokoa io.
Ka inona avy ireo fomba kely vitsivitsy ahafahantsika manangana ny fitokisantsika tena?
1. Mampiasà fahadiovana manokana
Mahagaga ny karazana fiantraikany amin'ny dondra, ny fikolokoloana ary ny akanjo mendrika amin'ny fiadan-tsaina ny olona iray.
Ny fikolokoloana tena matetika dia mijaly rehefa tsy mahatsapa tena ny olona iray. Midina izany ary mandrehitra ny fahaketrahana, izay manohy mamelona ny fahatsapana tsy mendrika ny fananana tena.
Ny fitazonana ny fenitry ny fikolokoloana sy ny fahadiovana, na dia mety tsy tianao aza izany, dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fahitan'ny olona ny tenany rehefa mandeha ny fotoana.
2. Miasa amin'ny fanafoanana ny firesahana samirery
Ny kalitaon'ny eritreritry ny olona iray momba azy ankehitriny dia misy fiantraikany amin'ny fomba fijeriny amin'ny ankapobeny ny maha-izy azy.
Ny firesahana samirery momba ny tena dia mila fanamby, atosika ary ferana araka izay azo atao.
Midika izany fa rehefa mahatsapa isika fa mieritreritra zavatra ratsy momba ny tenantsika, dia tsy maintsy ataontsika mavitrika ny fanoherana izany ary hanoherana izany amin'ny zavatra tsara hitantsika ao amintsika.
Mety hanampy ny mangataka fanampiana ataon'ny namana iray manampy amin'ny famoronana lisitr'ireo fiasa tsara momba ny tenanao. Atombohy isan'andro ny famakiana ny lisitra na ampiasao mandritra ny andro rehefa mila manohitra ny resadresaka ratsy ianao.
3. Mametraha ary manatanteraka tanjona kendrena
Ny fametrahana tanjona dia manampy amin'ny fitarihana olona mankany amin'ny zavatra lehibe kokoa. Ny tanjona lehibe sy mampitahotra rehetra dia ahitana kely kokoa, mora kokoa hahazoana tanjona.
Mitazona diary ho an'ny fametrahana tanjona, ny drafitra ary ny fikatsahana tanjona dia afaka manome lanja ny fahatokisan-tena satria azontsika atao ny manara-maso an-tanana ny zavatra vitantsika, ary ny halaviran'ny diantsika.
Ny diary iray dia afaka manampy antsika hanaporofo ny lanjantsika sy ny lanjantsika amin'ny fisainantsika fisalasalana. Na dia hanandrana tokoa aza ny saina dia sarotra ny miady hevitra amin'ny porofo mazava mihazona anao eny an-tananao.
4. Mampiasà fikarakarana tena sy fitantanana fihenjanana
Ny fikolokoloana tena dia mihoatra ny fenitra momba ny fikarakarana sy fahadiovana. Anisan'izany ny fitoniana sy ny fitantanana fahasahiranana.
Ny fiainana dia mitondra fanaintainana sy fitaintainana eo amin'ny fiainantsika. Mba hitantanana sy hitazonana dia mila mirotsaka amin'ny hetsika manala fahasahiranana isika ary mankafy ny fahanginana fotoana ho an'ny tenantsika . Mila mandanjalanja ny fikorontanan'ny fiainana isika amin'ny fialam-boly sy fialamboly sasantsasany.
Ny olona iray miaina fiainana be atao dia mety mila mandeha lavitra mihitsy aza mba handaminana manokana ny fikolokoloana tena ao anatin'ny fandaharam-potoanany be atao.
5. Miasa Mikaroka Positives Ao Amin'ny Fahadisoana
Tsy ny toe-javatra rehetra no tsara. Mety ho mora loatra ny manao fahadisoana ary hanapoaka zavatra iray izay tena nahaliana antsika na nahafaly anay tokoa.
Manao fahadisoana ny tsirairay, fa ny olona tsy manana fahatokisan-tena dia toa henjana amin'ny tenany noho ny hadisoany.
Ny fitadiavana ny zavatra tsara ao amin'ny lesoka ataontsika, ny fijerena ireo lesoka ho toy ny zavatra niainana, ary ny fanohizana ny fanatanterahana ny tanjontsika na inona na inona lesoka dia afaka manampy amin'ny fananganana lanja-tena.
Ny marina dia olona vitsivitsy tsara vintana ihany no mahavita ambaratonga fahombiazana nefa tsy manao fahadisoana lehibe eny an-dalana.
Ny lesoka sy ny tsy fahombiazana dia mila jerena ho toy ny traikefa ilaina amin'ny fianarana fa tsy ny faran'ny tetikasa. Ianaranao fotsiny izay tsy mandeha ary afaka manandrana zavatra hafa.
Ahoana ny fomba hanovana ny monologanao ao anaty mankany amin'ny zavatra somary ambony kokoa
Fomba 5 handray soa avy amin'ny minimalism ny fahasalamanao ara-tsaina
6. Araraoty ny safidinao amin'ny fiainana
Ny fihetsika tsy misafidy dia mbola misafidy. Manapa-kevitra ny hamela ny zavatra handeha nefa izy ireo handeha fa tsy manandrana mifehy sasantsasany ary hanao toe-javatra iray, mamela ny tena ho amin'ny lahatra.
Izao no voalaza, ' Rehefa izay dia izay ”Alohan'ny hisondrotanao ny sorokao ary ahodinkodina ny masonao amin'ny hery tokony hanovanao ny vokany.
Ny olona tsy manana fahatokisan-tena matetika dia mahatsapa fa tsy manana safidy firy amin'ny fiainany sy ny zavatra tsapany. Ny vahaolana amin'izany dia ny manangona safidy betsaka araka izay tratranao ary manaraka azy hatramin'ny farany.
Eny, indraindray misy toe-javatra izay toa tsy misy safidy. Izany no nitranga. Fa arakaraky ny hametrahanao ny anjaranao no hitanao fa mifehy ny fiainanao bebe kokoa ianao ary hahatoky tena kokoa.
7. Manomboha programa fanatanjahan-tena tsy tapaka
Ny fanatanjahan-tena tsy tapaka dia ampahany lehibe amin'ny fitazonana saina sy vatana salama. Izy io dia afaka mahatsapa ho matanjaka ara-batana, izay manampy amin'ny fanamafisana ny fahatokisan-tena sy ny tanjaka ara-tsaina.
Ny programa fanatanjahan-tena dia tsy mila sarotra be vao manome tombony misy dikany. Na dia an-tongotra 30 minitra aza, intelo isan-kerinandro dia afaka manampy betsaka amin'ny ady amin'ny fahaketrahana sy manatsara ny fahatsapan'ny tena ho mendrika.
8. Mihinàna sakafo voalanjalanja sy ara-dalàna
Ny fahatokisan-tena ambany dia azo ampifandraisina amin'ny fahaketrahana sy ny toe-tsain'ny olona. Ny mood dia vokatra amin'ny lafiny maro amin'ny fisiana olona iray, ao anatin'izany ny sakafon-tsakafo.
Ny olona tsy manana fahatokisan-tena izay tsy mahatsapa tena ho mendrika hikarakara tena na hikarakara azy ireo dia mety hitady fampiononana amin'ny sakafo maloto tsy manome tombony misy dikany.
Ny fitazonana sakafo voalanjalanja sy ara-dalàna dia mety hanampy amin'ny fahaketrahana, ny adin-tsaina ary ny fanatsarana ny fahitana ny tenany. Mora kokoa ny misintona amin'ny fikolokoloana ny vatanao amin'ny alàlan'ny famahanana solika tsara azy.
9. Vitao ireo lahasa izay mety hatsahatrao
Ny fanatanterahana asa dia tsy mitovy amin'ny fametrahana tanjona. Isika rehetra dia manana antsipiriany kely sy adidy kely ilaintsika mandritra ny androntsika. Matetika loatra, ireo zavatra kely ireo dia latsaka amoron-dalana satria na be atao isika na tsy miraharaha tsotra izao.
Aza apetraka izy ireo!
Atombohy ny fiampitana ireo zavatra ao amin'ny lisitra 'To Do' mba tsy hahantonanao eo ambonin'ny lohanao.
Andramo ny tsotra Fitsipika dimy minitra ! Raha misy adiresy na adiresy iray mila dimy minitra latsaka vao vita, aza esorina izany. Ataovy dieny izao dia vitao ilay izy.
maninona aho no olona ratsy toetra
Ny tsy fananana ireo pitsopitsony sy adidy mihantona eo ambonin'ny lohantsika ireo dia afaka mampihena ny adin-tsaina sy ny fahatokisan-tena rehefa mahita ny tenantsika mahavita zavatra tsy tapaka.
10. Tazomy ny fandaharam-potoana fatoriana tsy tapaka mahasalama
Ny torimaso no vato fehizoron'ny fahasalamana ara-tsaina. Ny ati-doha dia mamokatra zavatra simika mampifandanjalanja ny toe-po amin'ny torimaso lalina indrindra. Ny tsy fahampian'ny torimaso dia mety hiteraka famoizam-po na faharatran'ny aretina ara-tsaina hafa na fikorontanana.
Arakaraky ny hatoriantsika tsara no ahafahan'ny saintsika miasa bebe kokoa. Ankoatr'izay, raha reraka tontolo andro isika dia mora kokoa ny sosotra amin'ny toe-javatra iray na ny tenantsika.
Ny torimaso tsara amin'ny alina dia ampahany manandanja amin'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Izy io dia afaka manatsara ny toe-tsain'ny olona iray ary manamaivana ny enta-mavesatry ny adin-tsaina sy ny fanahiana entin'ny olona iray amin'ny fiainany, izay mandika ny fahitan'ny tena ny tena.
Ny olona mahatsapa fa ny fahatokisan-tena momba ny tenany, ny fiteniny ary ny fahitany azy matanjaka loatra ka tsy afaka manamboatra tena dia mety mila mangataka fanampiana avy amin'ny mpanolo-tsaina.
Mbola misy stigma iraisana fa ny mpanolo-tsaina dia natao ho an'ny 'olona adala' fotsiny. Ny marina dia karazan'olona marobe no miresaka amin'ireo mpanolo-tsaina mba hanampiana hahita fomba tsara kokoa hamahana ireo zavatra mandeha ao an-tsainy.
Tsy hoe 'adala' na marary ara-tsaina akory. Indraindray isika dia mila ny fanampian'ny olona efa zatra manampy antsika hamaha olana manokana fotsiny.
Ny fitadiavana fanampiana avy amin'ny matihanina ara-pahasalamana voamarina raha sahirana ianao dia zavatra tompon'andraikitra sy be herim-po. Ny ati-doha dia zavatra sarotra!
inona no hatao rehefa tsy matoky anao ny sipanao
john cena totohondry ny kintana avaratra
inona ny ohatry ny jiro lasantsy?
mpiambina vs andre ilay goavambe